Antony - fanoherana ny foto-kevitra momba ny miralenta
Antony (fiaraha-miasa amin'ny fanabeazana ara-nofo tsy azo antoka)
Transgender Manenina Videos By Detransitioners
Lahatsary 12 an'ny Profesora John Whitehall napetraka tao amin'ny Childhood Gender Dysphoria
Walt Heyer - nenina Transgender
Ny programa Safe Schools dia nampiharina tamina sekoly manerana an'i Aostralia izay mampianatra firehan-kevitra momba ny lahy sy ny vavy LGBT amin'ny ankizy mandritra ny fotoana mivoatra ny maha-lahy na maha-vavy azy ireo ary rehefa marefo amin'ny fisafotofotoana ara-nofo izy ireo. Nahita fipoahana ny isan'ireo zaza nentina tany amin'ny tobim-pitsaboana lahy sy vavy i Aostralia taorian'izay. Ny tranonkala CAUSE dia misy lahatsoratra matihanina maro momba ny transgenderism, Gender Dysphoria, Therapy Fiovam-po, fanovana firaisana ara-nofo ary Sekoly azo antoka, nataon'ny matihanina toa ny Profesora John Whitehall, Profesora Dianna Kenny sy ny maro hafa.
Sekoly azo antoka.
Hevitra momba ny miralenta any an-tsekoly.
Ny dokotera mpitsabo dia manambara ny zava-misy amin'ny Transgenderism.
Prof John Whitehall dia manoratra ao amin'ny Quadrant Magazine ao amin'ny Gender Dysphoria.
Hormone Blockers sy ny zava-drehetra Transgender.
Torohevitra sy fitsaboana izay mandeha.
Resaka roa, vehivavy pelaka ary ex iray miresaka momba ny fandaozany ny fiainany LGBT taloha. Ny 13 hafa koa dia mizara ny tantara nosoratany momba ny fomba nanampian'ny mpanolo-tsaina azy ireo.
Tranokala fanenenan'i Walt Heyer fanovana fanovana.
Walt Heyer dia nipetraka nandritra ny 10 taona teo ho eo talohan'ny nifindrana sy nilaza fa misy olona tsy afaka manova ny firaisana ara-nofo.
Mila mitady mpanolo-tsaina.
Jereo eto izy ireo.
Sekolin-tsaina azo antoka momba ny miralenta.
Mpianatra ao an-dakilasy mihodina milalao fitondran-tena LGBT
Ny programa Safe School momba ny firehan-kevitra momba ny lahy sy ny vavy dia notendren'ny vondron'olona manana ny toerany mendri-kaja satria tamin'ny voalohany dia natao hamahana ny olan'ny fampijaliana ity.
Ny zavatra lasa lasa kosa dia nanosika fetra mihoatra ny sehatra nindram-bola. Miara-mijoro izahay ary manohana ny Governemanta Federaly Coalition amin'ny fanesorana ny famatsiam-bola sy ny fanohanana an'ity programa ity amin'ny endriny ankehitriny.
Ny fandaharam-potoana atosiky ny fiaraha-miasa amin'ny Safe Schools dia mikendry ny tanora sy ny ankizy amin'ny taona mora tohina ary mikendry ny hampisaraka azy ireo amin'ny fotom-pianakaviana nentim-paharazana sy ny soatoavin'ny fiarahamonina hitazomana ny olom-pirenena rehetra. Mangataka aminao izahay mba hampiala ny sainao amin'ity programa ity ary mankany amin'ny programa iray mikendry ny handamina ny fampidirana sy ny fanekena TSY miorina ary mitanila amin'ny lahy sy ny vavy sy ny firaisana ara-nofo.
Dysphoria momba ny lahy sy ny vavy. Andian-dahatsary 12 misy Transcripts.
Firaisana ara-nofo. Hétone fitsaboana. Fandidiana amin'ny firaisana ara-nofo. Ny torohevitra ara-tsaina. Nohazavaina ny Transgenderism.
Jereo ireo horonan-tsary amin'ny teny Anglisy na ampiasao ny mpandika teny Google amin'ity pejy ity hamakiana ireo sora-tanana amin'ny fiteninao.
Ny ray aman-dreny rehetra dia mahafantatra fa rehefa mitaiza ny ankizy, dia misy faritra marobe izay mety ho sarotra ny mifehy, ary ny ankizy tsirairay dia mila ny fikarakarana manokana azy. Saingy fantatsika rehetra fa mampidi-doza ny afo, noho izany dia mampitandrina ny ankizy amin'ny loza amin'ny fomba izay azon'izy ireo takarina isika. Tsy mamela azy ireo hianatra fa mampidi-doza ny afo amin'ny famelana azy ireo hilalao aminy. Ny tsinay sy ny fanaintainana dia hahatsapa ela be taorian'ny fahavoazana raha toa ka izany no nitranga. Tahaka izany ihany koa, nahoana no tokony hangatahana ny hamela ny zanatsika handray anjara amin'ny fandaharam-pampianarana izay mangataka ny ankizy hanakana ny fahatokisany amin'ny sehatry ny fianakaviany noho izy ireo manome ny fitarihana ilaina mba hanatontosana ny lohahevitry ny fahamaotinana, ny fahamatorana ary ny fampandrosoana noho ny "fanabeazana" ankoatra ny habetsaky ny fanararaotana sy ny fanekena ny fahasamihafana. Saingy izao no angatahin'ny Sekoly School Safety antsika hanao izany.
Mpikambana ao amin'ny Parlemanta Aostraliana Andriamatoa Andrew Haste.
Ny depiote Andrew Hastie dia miresaka momba ny programa “Safe Schools” ao amin'ny Parlemanta Aostralianina.
Fantaro ny fandaharam-potoana sy ny haavo ny kianja filalaovana - tadiavo ny antony ampianaran'ity programa ity ao ambadiky ny varavarana mihidy ary tsy misy safidin'ny ray na reny. Raha misy zava-dehibe ny fiarovana ny zanatsika dia tokony hisokatra amin'ny fandinihana sy ny fandraisana anjaran'ireo rehetra voakasik'izany amin'ny fitaizana ny tanora hahatakatra fa olombelona isan-karazany isika, mitovy amin'ny lafiny rehetra. Mangataha kopia iray amin'ny fandaharam-pianarana, ary raha tsara vintana ianao mahita sekoly vonona hanambara ny atiny, dia miomàna hahafantatra ny fiantsoana andraikitra napetraka teo anoloanao.
Nanazava ny mpanao mari-trano any amin'ny Sekoly Safe Roz Ward fa tsy mikasika ny fampijaliana izany.
Roz Ward mpanao mari-pahaizana amin'ny Programme "Safe Schools" dia nanaiky fa ny Safe Schools dia tsy resaka fanaovana habibiana.
Ho an'ireo izay mbola tsy vonona ny hitolo-batana ny zonao amin'ny maha-ray aman-dreny anao mba hampianatra sy hitarika ny zanakao amin'ny alàlan'ny fotoam-paharetan'ny fahamaotinana sy ny fahamatorana matetika, miangavy anao ho mavitrika! Izao no fotoana hanohanana ny fanohanana ny fanesorana ity programa fanandramana sy fisaraham-bazana ity.
Reny iray miresaka momba ny fahitana ny firehan-kevitry ny lahy sy ny vavy ampianarina any an-tsekoly.
Ny tantaran'i Cella momba ny zanany sy ny “Sekoly azo antoka” ao amin'ny sekolin'izy ireo.
Ity no fomba ahafahanao manambatra ny vondrom-piarahamoninay mba hampiroboroboana am-pahavitrihana ny fahatakarana sy ny fanekena:
Mavitrika amin'ny sekolinao. Jereo hoe inona ny hetsika ara-piarahamonina napetrak'izy ireo amin'izao fotoana izao amin'ny fankalazana ireo olona tokana izay mahaforona ny fiarahamonina - manatevin-daharana sy mankalazà ireo hetsika marobe ampanaovin'ny sekoly mba hanohanana ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo - tsy ireo izay manana fandaharam-potoana mety hifantoka amin'ny firaisana ny maha-izy azy ho fototra iorenan'ny.
Jereo hoe inona no ampianarin'ny sekolinao sy ireo programa ampiasainy hampianarana ny ankizy sy ny tanora momba ny fanekena amin'ny endriny REHETRA - momba ny fitoviana, ny fangorahana ary ny fahatakarana ny fahasamihafana amin'ny endriny rehetra. Tohano ny sekolinao amin'ny fampahalalana sy fahatakarana fa ny SAFE dia tsy mitovy amin'ny saranga miharihary.
Avereno ilay teny hoe SAFE - ataovy izay hahazoana antoka fa tsy fanalefahana endrika momba ny fikolokoloana zaza mihoatra ny fahalalany sy ny fironana voajanahary amin'ny fahalianana. Ny ankizy matotra amin'ny taha samihafa ary tsy avelan'ity programa ity izany. Izy io dia manery ny foto-pisainana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra any amin'ny faritra saro-pady alohan'ny ankizy maro no vonona hahatakatra ny haben'ny fahotana sy ny faharetan'ny safidy noraisina. TSY azo terena ny fahamatorana sy ny fahamatorana ara-nofo ary ny fomba fanesorana ny fandraisan'anjaran'ny ray aman-dreny an'ity programa ity dia tsy hetsika ara-pahasalamana tokony hipetrahantsika moramora sy ekena. MITENY TSIA! ary alao antoka fa fantatry ny sekolinao ny fanapahan-kevitrao.
Raha mbola tsy any am-pianarana ny zanakao, dia tadiavo ireo sekoly eo amin'ny faritra misy anao amin'ny alalan'ny famangiana azy ireo ary mangataka ny handeha an-tongotra mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra na maimaim-poana. Jereo ny fomba fifandraisan'ny ankizy sy ny fijerin'ny ankizy ny faneken'ny ankizy amin'ny asany.
Manorata any an-toerana MP na Premier ary avelao izy ireo hahafantatra fa manohana ny governemanta federaly ianao mba hanesorana io fandaharam-potoana io ho an'ny programa mangarahara sy mavitrika kokoa. Ho an'ny SAFE dia midika fa mihoatra noho ny firaisana ara-nofo ary ny fanekena ny endriny rehetra. Fandaharan'asa iray izay manohana ny fianakaviana ary mamela azy hiasa amin'ny fampianarana ny taranaka ho avy ny soatoavina sy ny fahatakarana fototra izay tadiavin'ny programa fandaharam-pianarana Safe Off.
ATAOVY TSY MISY VAVY, azonao antoka fa fantatrao ny fanohanan'ny mpifaninana tsirairay sy ny fandaharam-pampahalalany. Raiso amim-pahamatorana ny safidinao ary mandefa hafatra amin'ireo kandidà tsy handefitra amin'ny fanalana ny zon'ny fianakaviana.
Ny governemanta dia afaka manome izay tadiavintsika, raha milaza azy ireo aloha isika. Fantaro sy ankalazao ny fahaizanao ho ray aman-dreny hitarika ny zanakao. Raha toa ianao ka sahirana amin'ny fifampiresahana sy fahatakarana ny anjara andraikitrao dia mitadiava ary asao ny fandaharam-panohanana ny ray aman-dreny eo an-toerana. Tsy safidy azo atao ny mamela ny zanakao handray anjara amin'ny fandaharam-pampianarana izay nanidy ny varavarana teo aminao ary mamporisika ny safidy sy ny "tsiambaratelo" manosika ny safidy safidy Safe Schools.
Aza avela handresy anao ity programa ity-MANDEHA IT!
Mifandraisa aminay. Email: cause.victoria@gmail.com
Ampio izahay hiaro ny zanakay.
Manomeza fanomezana. Banky: NAB BSB: 083-547 ACC: 87-690-0206
Copyright © 2021 Antony (fiaraha-miasa amin'ny fanabeazana ara-nofo tsy azo antoka)